Ny tady Wire Fittings
Crosby Mini sandoka Ratchet Type entana Binders Turnbuc ...
G450 HDG US Type Drop sandoka Wire tady Clamps
C15 M16 Zinc nopetahany takela CR3 DIN582 sandoka Eye manainga ny voanjo
Hot Dip nandrisika G403 valanoranony Ny Swivel
Nandrisika Sokiro Pin Bow tongony G209
Firaka Steel voaloko Red Drop sandoka Eye Hoist Liftin ...
Stainless Steel Long D tongony Long Type
1. Description ny Stainless Steel Long D tongony Long Type
Ara-nofo: Stainless Steel, SS304 na SS316
Mety ho fampiasana amin'ny fanandratako
2. Product famaritana ny Stainless Steel Long D tongony Long Type
Item: Stainless Steel Long D tongony Long Type
Size:from 4mm ho 12mm
Fonosana: PP kitapo + baoritra + pallet, na araka ny mpanjifa '
Load seranan-tsambo: Qingdao seranan-tsambo na seranana hafa any Shina
Shipping: amin'ny sambo na fiaramanidina
1. ve ianao, na ara-barotra ny orinasa orinasa?
Nanomboka toy ny vatofantsika rojo orinasa tokony ho 20 taona lasa izay, ary Lasa tsikelikely ho any an-dranomasina lehibe mpanamboatra sakafo.
Mandritra izany fotoana izany, hitsena ny fangatahana tsy mitsaha-mitombo avy amin'ny mpanjifa ao amin'ny faritra raharaham-barotra vaovao, dia nampivelatra ny sehatra ho Fangalarana fitaovana sy fasteners, ary ny hafa mifandray amin'ny alalan'ny fametrahana fitaovana mafy fiaraha-miasa amin'ny orinasa hafa.
Ary mirehareha izahay ny milaza fa Rui DE Tai dia laharana faha toy ny mpamatsy ambony eo amin'ny rojo & Fangalarana fitaovana any amin'ny faritra avaratr'i Shina.
2. Aiza ny orinasa hita?
Ny orinasa dia tanàna ao amin'ny Jimo, Qingdao City, Shandong Province, Sina.
Nandray ianao hitsidika anay na oviana na oviana ho an'ny ho avy ny fiaraha-miasa.
3. Inona no vokatra no manome?
Araka ny voalaza etsy ambony, manome an-dranomasina isan-karazany fitaovana, rojo, Fangalarana fitaovana, fasteners, ary mifandray fitaovana.
4. Ahoana no hifehezana tsara?
Amin'ny alalan'ny fametrahana ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny hevitra sy nanara-maso isaky ny dingana famokarana amin'ny fitsipika hentitra, ny tsininy vokatra ho fongotra eo anatrehan'ny fonony sy ny lahateny.
Fa mpiara-miasa orinasa, mampiasa ny rafitra feno ny kalitao fitsipika hanombanana ny famokarana tsipika. Koa ny ekipa matihanina QC dia mampihatra ny onsite maso sy hamita maso alohan'ny fanaterana vokatra.
5. Nahoana no mendri-pitokisana ianareo kokoa noho ny hafa orinasa?
Izahay feedback ny fanontaniana avy hatrany 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro.
Afaka manome vidiny kokoa fifaninanana miorina amin'ny toetra mitovy lenta amin'ny fitantanana mahomby kokoa eo amin'ny dingana rehetra.
Fotsiny hoe izay ilainao, ary mahatakatra ny iray Ho iray-mijanona vahaolana noho ny raharaham-barotra mba hamonjy
ny fotoana sy ny ezaka.
6. Ahoana no mandoa vola?
Manaiky 30% fandoavam-bola mialoha & 70% alohan'ny sambo voalohany fiaraha-miasa, na ny T / T na ny l / C.
7. Ahoana no mandray ny fananany?
Izahay mpiasan'ny fitaterana matihanina, isika afaka fanaterana vokatra ho seranana indrindra manerana izao tontolo izao. Door-trano manohana ny fanompoana koa. FOB, C & F, CIF no ampiasaina matetika indrindra varotra iombonana.
Tonga soa eto amin'ny mividy sy mivarotra ambongadiny ny Stainless vy mahamay lava e gadra lava karazana. Izahay iray amin'ireo tena matihanina sy nitarika Fangalarana mpamokatra sy mpamatsy vokatra. Mba ho afaka ny hahazo ny levitra avy amintsika sy ny orinasa mifandray bebe kokoa info.
Previous: 55T 2 1 / 2US Type Bolt Type Chain tongony G2150
Threaded Shank fihantonana 319
G80 Eoropa Type voaloko Swivel Self Fanidiana S ...
AISI Stainless Steel simplex, Wire tady Clips
Yellow Zinc DIN1142 Cast Iron Wire tady Clips
Yellow nandrisika Eye haka fihantonana 323
16mm Eoropeana lehibe Type nandrisika fanandratako Bow ...
Inona no ny fampiasana ny tariby tady tsary?
Stainless vy Thimbles fifandraisana
Inona no vidin'ny Stainless vy Thim ...
Fangalarana rojo vy eo amin'ny fampiasana ny Pr ...
Fanasokajiana ny manainga fihantonana